Thwebula Spotify 1.0.45.186 – Vessoft
Spotify – a isofthiwe yakhelwe ukuthola futhi balalele umculo online. Isofthiwe iqukethe module evumela ukuthi wena ukucinga music ngeziqu ingoma, izinhlobo, abaculi, ama-albhamu, noma uhlu lwadlalwayo wadala. Spotify kuwuthinta Facebook futhi kwenza ukubuka amaqoqo zomculo labangane, wabelane amarekhodi akho nanjengeqembu uhlela lokudlalwayo. Isofthiwe kuhlanganisa wezincwadi omkhulu, radio, izincomo ngokusekelwe okulalela kwamarekhodi, ukusebenza ukuthandwa futhi abaningi nezinye. Spotify ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Ukucinga bese ulalele umculo online
Division elula amathrekhi
A umtapo enkulu lezingoma
Ithuba sibambane uhlele uhlu lwadlalwayo
Amazwana on Spotify:
Spotify Ahlobene software:
English, Español, 中文, 日本語... foobar2000 1.3.14
English, Français, Español, Deutsch... Avant Browser 2016 build 7 Standard futhi Ultimate